Etu ị ga - esi mara awa ole ị gere egwu na Spotify n'oge 2017 | Akụkọ akụrụngwa
O doro anya na Spotify bụ usoro eji egwu egwu egwu egwu kachasị n'ụwa, ọ gbanweela kemgbe afọ ole anyị si eri egwu, ọkachasị etu anyị si achọpụta ya. Nke a bụ otu ikpo okwu si jikwaa kemgbe mmalite ya iji merie ihe na-erughị Ndị ọrụ nde 140, nke nde 60 na-akwụ ụgwọ ndị ọrụ.
Mgbe ekwuputara mmekorita ya na ndi China nke ya na Tencent, ikpo okwu a amalitela usoro ya puru iche kwa afo iji choputa n’ime omimi nke oge anyi jiri oge anyi na ege egwu. Chọpụta anyị ole awa ị na-ege egwu na Spotify n'oge afọ 2017 na usoro ole na ole dị mfe.
Kedu ihe anyị ga - eme iji mara ole egwu anyị gere site na Spotify n’afọ 2017? Ọfọn, dị mfe, anyị ga-aga www.2017wrappped.com, webụsaịtị nke Spotify amalitela ka anyị nwee ike ịmụtakwu banyere ọ bụghị naanị oge anyị etinyegoro na ikpo okwu ha, kamakwa ihe bụ ụdị kachasị amasị anyị, abụ anyị na-ege ntị na otu anyị n'afọ. Maka nke a, anyị ga-edozi ajụjụ mmekọrịta gị, ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ikpochapụ. Ikekwe data ndị a na-eju anyị anya.
N'okwu m, etinyewo m 33.912 nkeji, ntakịrị karịa 565 awa, yabụ enwere m ike inwe afọ ojuju na-eche na m na-akwụ ụgwọ maka nsụgharị ahụ, ma ọ dịkarịa ala, anyị nwere obi abụọ ma ma ọ bụ na iji offline eme ihe na-anọghị n'ịntanetị (nke m puru apia). Bụrụ na ọ nwere ike, ụdị atụmatụ ndị a abụghị ihe mere Spotify ji ewu ewu, mana eziokwu ahụ bụ na onye ọrụ ya bụ nke kachasị mfe iji na Ọ bụ usoro mgbasa ozi dị irè n'ezie, egwu ole ka ị gere na Spotify na 2017?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Etu ị ga - esi mara awa ole ị gere egwu na Spotify n'oge 2017
Ego Bitcoin ihe ọ bụ na otu esi azụta?